साथीले विवाह गरेको देखेपछि विवाह गरौँगरौँ लाग्दैन ? « Chautari Online
साथीले विवाह गरेको देखेपछि विवाह गरौँगरौँ लाग्दैन ?
साथीले गरेको देखेपछि विवाह गरौँगरौँ लाग्दैन ? हालै वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुभएका नायिका एवं अन्य साथीहरूको वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवनमा सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु । विवाह जीवनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, विवाह देखेको होइन लेखेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । विवाह र मरण भन्ने कुरा कसैको हातमा हुँदैन । त्यसैले मैले पनि अहिलेसम्म विवाह कहिले गर्छु भनेर सोचेकै छैन । सोचमै नआएपछि त्यसबारेमा धेरै कुरा पनि हुँदैन । यति भन्न सक्छु कुनै न कुनै दिन विवाह हुन्छ तर कहिले हो त्यो भविष्यले नै तय गर्नेछ ।
पूजा शर्मा, नायिका
…विवाह दुई परिवारबीचको मिलन हो । एकआपसमा सेयरिङ र केयरिङ पनि हो । मान्छेलाई कुनै पनि दुःख र सुखमा एउटा साथी चाहिन्छ । त्यही जीवनसाथी पाउने कुरा नै विवाह हो । मैले आफ्नो विवाहका बारेमा योजना बनाइसकेको छु । घरमा कुरा पनि भइसकेको छ । यही वर्षको अन्तिमतिर विवाह गर्ने मेरो सोच छ । चिनेको, जानेको र आफूलाई माया गर्ने मान्छेसँग विवाह हुँदैछ भन्ने कुरामा उत्साह पनि हुँदो रहेछ । मलाई अहिले त्यस्तै लागिरहेको छ । तर, विवाहअघि धेरै काम पूरा गर्नु छ ।
…विवाह गर्नु राम्रो कुरा हो । नेपालका केही सेलिब्रेटीले विवाह गरेकामा मलाई धेरै खुसी लागेका छ । मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्दा अहिले विवाह गर्ने बेला भएजस्तो लाग्दैन । विवाहले करिअर रोकिन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । करिअर र विवाह फरकफरक पाटा हुन् । दुवैलाई एकैसाथ अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ । त्यसैले भाग्यले कहिले जुराउँछ, त्यस बेलै विवाह हुन्छ ।
वर्षा राउत, गायिका
…मेरो व्यक्तिगत जीवनको कुरा गर्ने हो भने अहिले नै विवाहको बारेमा कुनै सोच छैन । पछिल्ला समय जजसले विवाह गरेका छन् उनीहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरैधेरै शुभकामना छ । कसैलाई माया गर्दा योजना बनाएर नगरिने हुनाले विवाह पनि जहिले जु¥यो त्यही बेला हुने हो । जीवनमा विवाह त गर्नैपर्छ । हुनसक्छ, एक महिनापछि वा एक वर्ष । या त्योभन्दा पनि धेरै पछाडि पनि हुन सक्छ । तर आफूलाई विवाहका लागि उमेर पुगेजस्तो लाग्दैन ।
खुश्बु खड्का, नायिका
…विवाह भनेको जीवनमा गरिने एउटा ठूलो प्रतिबद्धता र वाचा हो । विवाह भइसकेपछि एउटी महिलाले आफ्नोबारेमा मात्रै नभई सबैको बारेमा सोच्नुपर्छ । पूरै परिवारका लागि आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ । त्यसले जसले जीवनभर माया गर्छ, मलाई इज्जत गर्छ, त्यस्तो मानिस नभेटिउन्जेल म विवाहको बारेमा सोच्दा पनि सोच्दिनँ । समाजले यसको उमेर भयो, अब विवाह गर भनेर दबाब दिएकै भरमा म विवाह गर्दिनँ । कसैले गर्नु पनि हुन्न । विवाह परिवारसँग जोडिएको भए पनि स्वविवेकले हुनुपर्छ । त्यसैले जति बेला सही जीवनसाथी भेट्छु, त्यति बेला विवाह गर्छु ।
मलिना जोशी, पूर्वमिस नेपाल